Chii chandingapa kuna amai vangu?
Amai ndivo vari pedyo, vanhu vakawanda vomunharaunda. Anotipa ushamwari hwakanyanya uye rudo kuti ndinoda kumufadza iye kazhinji. Pausiku hwemazororo, vanhu vazhinji vane mubvunzo: rudzi rwechipo rungapa kuna amai vako.
Anniversary uye zuva rekuberekwa
Urongwa hwezvipo zvaunogona kupa kuna amai vako pazuva rako rekuzvarwa ihuru. Ipa mhando yakanaka, yakarongedzwa nemaruva ane kadhi rakasimudza kana chinyorwa chemafashoni nemufananidzo unozokuyeuchidzai maminitsi anoshandiswa pamwe chete. Iwe unogona kuraira kana kuzvigadzirira kubheka keke kwekudya kwemasikati. Vakadzi vanoda ndiro, saka zvichava nyore kuziva zvisati zvaitika amai vasipo mukicheni uye kutenga chinhu ichi sechipo.
Chiitiko ichi ndicho chiitiko chakakomba. Kana iwe uchifunga kuti chii chaunopa amai kuti chiyeuchidzo, saka usava nechokwadi kuti chipo chakanakisisa chichave chaunofunga. Ipai chikope ku saloni - regai amai venyu vanodikanwa vazviise mumamiriro ezvinhu vasati vasvika. Endai ikoko pamwe chete uye mupedze zuva saiye mukadzi. Mushure meizvozvo, hachisi chivi chekuenda kutengesa mukutsvaga mahombekombe ezororo. PaJubheri, zvingave zvakakosha kuunza goridhe kana sirivha yekushongedza.
Zita mazuva ndiwo chiitiko chinoshamisa chokuonana naamai vangu. Iwe unogonawo kupa chimwe chinhu kuna amai vako nezita-mazuva, somuenzaniso, zvipfeko, kana akashandisa, kana bhokisi rakanaka rezvishongo. Kupemberera zita racho zuva, unogona kukoka amai vako kuchitoro chekofi uye unofara kwete kungoshamwaridzana chete, asiwo mararamiro akasiyana.
Kuchenjerera nguva dzose kunofadza zvikuru. Saka, ipai amai venyu chimwe chinhu chakanaka chiduku zvakadaro, pasina chikonzero. Chinova chando kana kushambidza munyu, seti yakanaka yeti kana kofi yaanoda ichakufadza iwe mose.
Ndeapi maruva anopa mai vangu?
Zvechokwadi, unoziva maruva aamai vako vanoda. Gerberas, roses, chrysanthemums, kusiyana-siyana muhari - chisarudzo nhasi chikuru. Chinhu chikuru ndechokuti chipo chaibva pamwoyo. Mumakore achangobva kupfuura, kunyanya kufarirwa maari orchids muhari. Uye iyo inodhura, uye inorarama kwenguva refu.
Haufaniri kufunga nguva refu, sei kupa chipo kuna amai. Zvechokwadi, mumunhu, hongu, nemashoko anodziya uye zvishuvo zvehutano hwakanaka. Iwe unogona kupa mai vako kubva kumwanasikana wavo bhuku remifananidzo rine sarudzo yemhuri yako mapikicha, mwanakomana wako anogona kupa amai vako tekiti yekambani yemudiwa wako wevanyori kana tiketi yeimba yemitambo. Nenzira iyo, kana achienda naye, amai, zvechokwadi, vachayeuka iyi kontori kana kushanda kwenguva yakareba.
Zvipo zvevechidiki vechidiki
Chii chokupa mari yehuni?
Chipo kuna mbuya kwemakore 80
June 27 - World Fisheries Day
Chikamu cheWest West
Nzira yekupemberera mwana wegore rekare?
Zvipo zveNyika Idzva 2015
Sei zvisingawanzopemberera kuchengeta zuva rekuzvarwa?
Zvipo zveNyika Itsva nemaoko avo pachavo
Zuva reMeiri Yenyika
Zvinoita here kupa girazi?
Mavhiki maviri masvondo
Cannes Mutambo 2016 - chifukidzo chekundu
Kubviswa kwebvudzi kumba
Flower of kalatei
Vintage style - iyo mitemo yekusika mufananidzo wefashoni mumutauro wekurima
Ungagadzira sei ice cream kumba?
Ndinokwanisa kutora pamuviri mushure meEctopic pregnancy?
Kuparara kwe hymen
Kukurumidze kudonha nyama sei?
Kendall Jenner akava heroine yemagazini chaiyo yeVogue
Iko inotonhora yekutsvaira
Tafura yebhasi yekicheni
Chii chingaisa murume wake mari yechando?
Zvinokwanisika here kuderedza mhepo midzi ye orchid?
Anisocytosis munyaya yakawanda yeropa
Mavhiki mashoma sei pamuviri unoguma?
Kushungurudza pamahwindo muimba yemapuranga
Chii chiri kurota kwamai vangu?
Esophagitis - zviratidzo